May 2019 – Dhammadīpa
Badly Directed Mind
Posted on 18 May 2019 by Ashin Sopāka
“Whatever an aggressor might
do to an aggressor, or an
enemy to an enemy,
a mind that’s badly-directed
can do far worse than that to him.
“Mother and father might not do
for him, or other relatives,
as much good asamind that is
well-directed can do for him.” – Dhp 42, 43
“Diso disaṁ yaṁ taṁ kayirā,
verī vā pana verinaṁ;
pāpiyo naṁ tato kare.
Na taṁ mātā pitā kayirā,
aññe vāpi ca ñātakā;
seyyaso naṁ tato kare.”
ခိုးသူတစ်ယောက်သည် ခိုးသူတစ်ယောက်ကို (မြင်သော်) ပျက်စီးအောင် ပြုရာ၏။ ရန်သူတစ်ယောက်သည် ရန်သူတစ်ယောက်ကို (မြင်သော်) ပျက်စီးအောင် ပြုရာ၏။ မကောင်းသဖြင့်ထားအပ်သော စိတ်သည်ကား ထိုစိတ်ရှိသူကို ထို့ထက်ပင် ယုတ်ညံ့အောင် ပြုနိုင်၏။
ထို လူ နတ် နိဗ္ဗာန် သုံးတန်သော ချမ်းသာမျိုးကို အမိအဖသည် မပြုနိုင်၊ တစ်ပါးသောဆွေမျိုးတို့သည်လည်း မပြုစွမ်းနိုင်ကုန်။ ထို လူ နတ် နိဗ္ဗာန် သုံးတန်သော ချမ်းသာမျိုးကို ကောင်းစွာထားအပ်သော စိတ်သည်သာလျှင် ထိုမိဖဆွေမျိုးတို့ထက် တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် မြင့်မြတ်အောင် ပြုစွမ်းနိုင်၏။
“Ðiều mẹ cha bà con,
White Cheeked Starling
Posted in Dhamma	| Tagged citta, dhamma, kamma, mind, unwholesome, wholesome
Posted on 11 May 2019 by Ashin Sopāka
“Established in virtuous behavior,
“a bhikkhu dwells thus ardently,
“A bhikkhu who delights in heedfulness,
he is close to nibbāna.” – AN 4.37
“Sīle patiṭṭhito bhikkhu,
indriyesu ca saṁvuto;
“Evaṁ vihārī ātāpī,
Bhāvayaṁ kusalaṁ dhammaṁ,
သီလ၌ တည်သော၊ ဣန္ဒြေတို့၌လည်း စောင့်စည်းသော၊ အစားအစာ၌လည်း အတိုင်းအရှည်ကို သိသော ရဟန်းသည် နိုးကြားခြင်း၌ အားထုတ်၏။
ဤသို့ နေလေ့ရှိသော (ကိလေသာကို) ပူပန်စေတတ်သော လုံ့လရှိသော နေ့ညဉ့် ပတ်လုံး ပျင်းရိခြင်းမရှိမူ၍ ယောဂလေးပါးကြောင့် ဘေးမရှိရာ (နိဗ္ဗာန်) သို့ ရောက်ခြင်းငှါ ကုသိုလ်တရားကို ပွါးစေသော မမေ့မလျော့ခြင်း၌ မွေ့လျော်၍ မေ့လျော့ခြင်း၌ ဘေးအားဖြင့် ရှုလေ့ရှိသော ရဟန်းသည် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းငှါ မထိုက်၊ နိဗ္ဗာန်၏ အနီး၌သာ ဖြစ်လေသတည်း။
“Tỷ-kheo an trú giới,
Tỷ-kheo gần Niết-bàn.”
Buddha at Chùa Long Hưng / Chùa Phương Trạch
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, mindfulness, morality, nibbāna, sati, sīla